Iphepha lokutshintshela (ukukhanya) i-A4 A4 ifomathi ye-T-shirt eyeyakho i-T-shirt yephepha elikhethekileyo lokudlulisa ubushushu: iphepha elikhanyayo lokudlulisa umbala lilungele ukuprinta iipateni kwimpahla enombala okhanyayo. Idigri yokunciphisa umbala wepatheni edluliselwe ngephepha lokudlulisa iphezulu, ayinamibimbi, i-elastic, ikrazuka kunye ne-cra...
Iphepha lokutshintshela luhlobo lwephepha eligqunyiweyo. Ukuba izinga lokwandiswa komgangatho odibeneyo kunye nephepha elixhasayo alihambelani phantsi kobushushu kunye nobushushu obuphezulu, kuya kubangela i-warpage enye. Xa iphepha lotshintshiselwano lijija, liya kubangela ukuphazamiseka kulandelayo: 1. Akulunganga ku...
Ukusetyenziswa okuphambili kwephepha lokudlulisa ubushushu
Ushicilelo lokufuduswa kobushushu kwelaphu lempahla, ilaphu lomkhusane, ilaphu lesanti, ilaphu lesambrela, ingxowa yesandla, ilaphu lekhaphethi, ilaphu lokudlala, njl njl. Izinto zeplastiki ezixhathisa ubushushu obuphezulu okanye umhombiso wokuhanjiswa kobushushu kumphezulu wezinto zeplastiki emva kokutshiza, ukubhaka kunye ne-electrophoresis. Ukuhanjiswa kobushushu kumphezulu wesinyithi...